Rally kwi PC: incazelo uhlobo umdlalo
Rally uhlobo kwi PC uvele emhlabeni kwekhulunyaka, lapho digital iphrojekthi onjiniyela ngenkuthalo cabanga amakhompyutha njengoba nesigcawu imidlalo ezithuthukayo. Kusukela ngaleso sikhathi, uye ningagudluzwa kuze kufike abacibishelayo, RPG noma isu, kodwa amaphrojekthi yisakhiwo sodumo, azinake. Mayelana nabo namuhla futhi sizobe ukukhuluma ku-athikili yethu.
Ngaphambi kokuya ukudlala e rally kwi PC, kubalulekile ukufunda ngezici kwalesi sigaba. Ngo wakhe yemijaho enkundleni qapha eduze okwangempela. Abashayeli ngesandla kufanele ubuke komgwaqo, shift amagiya, ukubambezela ku ematfuba kanye eside ukufunda ukuphathwa. Izimoto bawukuphela ones iqhaza izinhlanga ngesikhathi "Dakar". Lo mdlalo odlala efana isipiliyoni PC kubasebenzisi ngokuya mncintiswano futhi endleleni izimo. umsebenzi ofanayo ukuthuthukiswa esindayo, ngoba ngeke kube khona bakwazi ukunqoba ngisho eyokuqala izinhlanga emihlanu noma eyishumi.
Ukukhiqizwa uhlobo rally PC imidlalo yaqala lapho sekudlule ngenkathi console Dendi kanye Sega. Amaphrojekthi lokuqala okwakukhona kulo isiqondiso Richard Burns Rally futhi Colin McRae Rally. Babengavumelani ekuqaleni namaqiniso yamahhashi okungukuthi namanje kubhekwa cult imidlalo. Abantu bakhangwa lolu hlobo mncintiswano kwasekuqaleni ezihlukahlukene izimoto amathrekhi ukunyakaza.
Umdlalo wokuqala kwaba ngokuphelele abazinikezele ukuba eponymous umshayeli ziyaphawuleka, kodwa ngoba ekuqaleni Uvunyelwe ukuba uphathe imishini amaningi lapho wahamba racer. Kamuva zokuguqulwa ukulungisa ukuntuleka kwamavithamini, ukungezwani futhi babebaningi uhlanga izimoto. Eyesibili game yasungulwa ngaphansi kokuqondisa Colin Makreja, futhi kwakukhona okufana izimoto edume ngokuthi Subaru Impreza. Ukuthuthukiswa Uzokhanga kubo bonke abadlali, njengoba kakhulu okusikhumbuza rally "Dakar". Lo mdlalo ku-PC alilitshelwe, kodwa kunalokho wathola eziningi sequels. Manje laziwa igama elihlukile njengoba enengqondo kunazo yamahhashi umugqa.
Bambalwa khumbula ukuthi rally kwi PC "Ukungcola" uchungechunge inegama egcwele Colin McRae Rally: Ukungcola. Lokhu console ubonakele kuphela ngemva kokuba ingxenye yesibili, esanyatheliswa kuphela ngo-2009. Kwathatha isikhathi eside iminyaka eyishumi nanye, njengoba abalandeli ulinde njengoba liqhubeka edume kunazo yamahhashi Simulator. Onjiniyela baye bayisekela emasikweni abahamba phambili ngokuya ngezinqubomgomo okwangempela, kodwa impi waqhubekela asphalt imigwaqo kusukela emizileni ensimini. Kuyaphawuleka ethuthukisiwe ihluzo amasampula yesimanje, futhi kukhona namathuba wokuthuthukisa imoto yabo.
Ingxenye yesithathu lesibili emva impumelelo wafika ngemva kweminyaka emibili. Lapha, inani imizila liye landa izikhathi eziningana, futhi nethuba ukuhlela Ukufika ngesikhathi non-empambana ndawo. Ukuhlukahlukana futhi izinguquko enziwa, nalo impi wayeka by ejwayelekile annular izinhlanga. Ingxenye yokugcina Ukungcola Showdown ikufakazele ukuthi akungenxa lutho okungcono rally imidlalo basonta kulolu chungechunge. Naphezu ukuvela izakhi Arcade, ubuye ezithakazelisayo ngokuya izinhlanga emangalisayo eziyinkimbinkimbi ukuphatha.
Uma abantu abanentshisekelo kulo mdlalo isigaba Rally phezu amaloli, khona-ke kufanele nakanjani sizame amaphrojekthi amabili. Eyokuqala ukhonza wonke uchungechunge simulators eyaziwayo nomholo ngaphansi kwesihloko esithi "Nge wezimpahla lokulunguza iYurophu." Umsebenzisi ngeke abe umshayeli weloli, ukuthuthukisa inkampani yabo futhi ziphumelele zebhizinisi ethutha izimpahla. Nakuba uchungechunge ayikuvumeli ukushayela ngesivinini (okuyiwona izinhlawulo zinikezwa), kodwa ungakwazi kalula faka ikhodi bese udala uhlanga real edolobheni noma endleleni eya kuso.
Umdlalo wesibili eyaziwa kule isiqondiso kuyinto Spintires. Wabuye wagxila ukuthuthwa kwezimpahla, kodwa ijubane mingcele. Inkinga kuphela nansi njalo ukungcola ensimini imigwaqo ehlathini elikude, kungalesi sikhathi esifundeni kuyoba abadlali besebenza. Sizoba ngokwanele ukuba ahlupheke ngaphambi uthola ukuthuthukisa isivinini ngokwanele ukuhamba.
Okunye abadumile rally game on PC kukhona uchungechunge oluthi "Okugcwele drive 4x4". Onjiniyela zalolu chungechunge ziye wencike isithakazelo ezimweni zemvelo nobunzima ukuhambahambisa esifundeni. Abadlali kukhona engxenyeni yokuqala ezihlukahlukene SUV UAZ noma Jeep. Ngokuqhubeka bajoyine owaziwa imoto American Hummer. Umdlali unikezwa ithuba thuthukisa imoto yakho ngazo zonke izindlela futhi ukwandisa ijubane sezwe esiphambanweni.
Olubanzi amabalazwe ahlinzeke kokubili amasayithi isivinini imincintiswano, kanye ukubukeka izindlela ukwakheka ethutha indawo. Ngokuvamile zikhona izikhathi lapho kubalulekile ngawakhamela ayo zokugcina aphume Suv, ukuze unqobe lo sezwe nzima. Emdlalweni kulolu chungechunge kufanele sizilungiselele yokuphatha nzima kwakhe isikhathi eside kuphumela ezama ukuhamba.
Phakathi imikhakha abe umdlalo rally kwi PC, lapho kugcizelelwa ukuzijabulisa esukela nge ukuqhuma imithelela. Ngokuyinhloko kuyafaneleka FlatOut line, eyayinqamula unezitho amathathu kwempahla. Machines kule rally anemisila zempi zokuzivikela, ukushaqeka wezinciphisi for kuzuba kanye nokuqinisa umzimba. Winning ibangelwa ukufika kuqala ngaleso sekugcineni noma ukukhubaza bonke ababephikisa. It lwenteke inqwaba izimoto lemikhiqizo ezahlukene kanye ikhono uthuthukise kuzo zonke izici. amaphrojekthi Ukuphathwa has eziningi izakhi Arcade ngaphezulu, kodwa ngenxa umugqa namaqiniso nolokubhujiswa ezilotshwe uhlobo rally. Ingxenye yesibili neyesithathu hhayi lokushaya ngokuya izinguquko Gameplay, usanda kuya ihluzo izinga nokwehluka nge imoto ebiza.
Moto simulators nobunzima ababhekene nabo - umlando MotoGP 10/11
Ukuphila komuntu siqu, biography kanye Filmography umlingisi Yevgeny Tsyganov
Uyini cryptocurrency umphini?
Zhenya belousov: Biography nemisebenzi
Fashion namacici isizini ihlobo 2013